Mundo မြစ်၏ရင်းမြစ်၊ အထင်ကြီးလောက်သောသဘာဝဖြစ်စဉ် ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 27/03/2021 15:00 | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ဆွေမျိုး
Mundo မြစ်၏ရင်းမြစ်သည်ပြည်နယ်ရှိအလှဆုံးသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် Albacete။ ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ရေတံခွန်ထဲရောက်နေပြီလို့မင်းထင်လိမ့်မယ် ဟာဝိုင်ယီ။ သို့သျောလညျးသငျ၌ရှိကြ၏ Alcaraz တောင်တန်း, တက်စေသောသူတို့ထဲကတစ် ဦး Prebetic တောင်တန်း.
Mundo မြစ်သည်မြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်သည် seguraမြစ်များကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်၎င်းသည်မြစ်များကိုရရှိသည် Bogarra နှင့် Vega de Riópar။ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး စွာတော့မြို့တော်တော်များများကိုဖြတ်ကျော်ပြီးလှပပြီးသမိုင်းဝင်လှတဲ့ခရီးကိုသွားပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့မျှော်လင့်သွားကြသည်မဟုတ်။ Mundo မြစ်၏အရင်းအမြစ်မှစတင်ကြပါစို့။
1 Mundo မြစ်မွေးဖွားခြင်း, ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်ဆန်း
1.1 ဘယ်တော့သွားရမယ်၊ ဘယ်လိုသွားရမလဲ
1.2 Mundo မြစ်၏အဓိကလမ်းကြောင်း
Mundo မြစ်မွေးဖွားခြင်း, ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်ဆန်း
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Mundo မြစ်ကို Alcaraz တောင်တန်းကြီးမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အလွန်နက်ရှိုင်းသောဂူမှအပြင်ဘက်သို့သွားသည်။ သူတို့ကဒီ ၃၂ နှစ်ကီလိုမီတာကနေလူသိများတယ်။ တစ်ဖန်ဆွန်းသည်မတ်စောက်သောကတ္တားတောင်ထိပ်၏ထိပ်တွင်တည်ရှိသည်။
ဤကျောက်တုံးသည်ရေဖြတ်သန်းစီးဆင်းသောနေရာများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Mundo မြစ်ဂျက်လေယာဉ် ၎င်းသည်ကန်များဖွဲ့စည်းစဉ်ရေတံခွန်ပုံစံနှင့်ကျသည်။ ဤအရာမှ, က၎င်း၏စီးဆင်းမှုဖွံ့ဖြိုး။ ရေထွက်ပေါက်နှင့်အပင်များအကြားဆင်းသက်ခြင်း၏ရူပါရုံသည်ထူးခြားသောမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Mundo မြစ်၏ခမ်းနားထည်ဝါမှုအားလုံးတွင် Mundo မြစ်၏ရင်းမြစ်ကိုသင်မြင်ရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် နွေဦး။ ထိုအခါရေဂျက်သည်“ blowout” ဟုလူသိများသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင်အထင်ကြီးလောက်သောစွမ်းအားဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။
မြစ်မွေးသောနေရာကိုရောက်ရန်ကားကိုသင်သုံးရမည်။ ကတည်းက Riopar, သင်သွားမယ့်လမ်းကိုယူရန်ရှိသည် Siles။ ခြောက်ကီလိုမီတာခန့်အကြာတွင်အရင်းအမြစ်သို့သွားသောသွေဖည်မှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ထပ် ၂ ကီလိုမီတာကျော်သွားပြီးနောက်သင်ဒီကိုရောက်လိမ့်မည် ကားရပ်တဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး ကားရပ်ခြံ ကားတစ်ရာနှင့်ဘတ်စ်ကားခြောက်စီးအတွက်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အရင်းအမြစ်ကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာ Mundo မြစ်တစ်လျှောက်သင်သွားစရာအများကြီးကျန်သေးတယ်။
ကျနော်တို့အကြံပြုချင်တာကမင်းဟာလှပတဲ့တောင်တက်လမ်းကိုလျှောက်ဖို့ပါ။ မြစ်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၇ ကီလိုမီတာအရှည်ရှိသည့်နေရာနှင့်တစိတ်တပိုင်း။ သို့သော်လမ်းကြောင်းသည်မလွယ်ကူပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အမြင့် ၁၃၀၀ မီတာအမြင့်အထိဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည် အချို့အန္တရာယ်များ.
သို့သော်၎င်းကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်သင်ကမ်းလှမ်းသောရှုခင်းကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ တကယ်တော့ဒါဟာမှတဆင့်ပြေး Calares del Mundo နှင့် La Sima သဘာဝပန်းခြံ။ ထို့အပြင်ထိုလမ်းကြောင်းသည် Mundo မြစ်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ဂူ၏ပါးစပ်အထိရောက်ရှိသည်။ ဤသို့ပြုရန်သင့်အားအထူးခွင့်ပြုချက်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်အား caving equipment မလိုဘဲမီတာ ၁၅၀ ခန့် ၀ င်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ဘယ်တော့မှထပ်မံမကြိုးစားပါနှင့်။ ၎င်းသည်ဖယ်ဒရယ်ပညာရှင်များအတွက်သာသင့်တော်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လမ်းကြောင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ သူကဲ့သို့သောနေရာများကိုသင်တို့မြင်ရလိမ့်မည် Calar del Mundoဥမင်အတွင်းသို့ရေစိမ့်ဝင်နေသောတွင်းပေါက်ကြီးများရှိသောကုန်းပြင်မြင့်တစ်ခု။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤမြည်းသည် Mundo မြစ်၏အရင်းအမြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။ လင်းတ၊ လင်းယုန်နှင့်အခြားမျိုးစိတ်များကိုလည်းထိုဒေသရှိသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
Mundo မြစ်၏အရင်းအမြစ်သည်လှပသည်။ Segura မှာအဆုံးသတ်တဲ့အထိခရီးကိုဆက်သွားသင့်တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ကဖြတ်သန်းပါတယ် အလွန်လှပသောမြို့များ ငါတို့နောက်လာမည့်သင်စကားပြောသွားကြသည်သော။
ဤမြို့ငယ်သည်ဒေသတစ်ခုလုံးတွင်ရှေးအကျဆုံးmonရာမအမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အထဲတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အကြွင်းအကျန်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည် ရဲတိုက် - ရဲတိုက် မွတ်စလင်ခေတ်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျောင်း, ဆယ်ငါးရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ပေမယ့်အပြည့်အဝပြန်လည်နှင့် Gothic နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်Riópar the မှာကြည့်နိုင်ပါတယ် San Juan de Alcaraz ၏တော်ဝင်စက်ရုံများ၏ပြတိုက်။ ၎င်းသည် ၁၈ ရာစုမှ ၂၀ ရာစုနှစ်များအတွင်းတည်ရှိပြီးဘုရင်အမိန့်ဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သောကြေးဝါနှင့်ကြေးဝါစက်ရုံများ၏သက်ရှိထင်ရှားသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ကားလို့စ် III.
၏မြှို့နယ်၌တည်ရှိသည် Molinicosဤနေရာကိုရီယိုဒိုဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အထူးကောင်းမွန်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထင်းရှူးပင်များနှင့်မှိုများရှိသည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ထူးခြားသောပုံမှန်လမ်းများကိုဖြတ်လျှောက်။ ၎င်း၏အဝတ်ဟောင်းအဟောင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
Mundo မြစ်၏ဘယ်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိသော Isso ခရိုင်ငယ်လေးနှင့် ပို၍ သက်ဆိုင်သည်။ အထဲတွင်, သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Santiago Apóstol၏ဘုရားကျောင်း, ဆယ်ရှစ်နှစ်ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်နှင့်အရာ Isso ၏နာယက၏ပုံရိပ်ကိုအိမ်နှင့် Almohad မျှော်စင် ယနေ့ရဲတိုက်နှင့်ဖွဲ့စည်းသော XIII ၏ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်မှာတော့မတူညီတဲ့အရာကိုကြည့်ဖို့သင့်ကိုအကြံပေးလိုပါတယ် တံတားများ မြစ်ကိုဖြတ်ကူးသော ၎င်းတို့ကိုအစဉ်အလာအားဖြင့်ရောမဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသူတို့သည်အလွန်လှပသောရှုခင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် « The Serrana ကျောက်မျက်ရတနာ», ဤမြို့ရုပ်ရှင်ချစ်သူများများအတွက်ဘုရားဖူးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 'သေးငယ်တဲ့အရာမဟုတ်သော Sunrise'၎င်း၏လမ်းများပေါ်တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည်ကတည်းက။ သို့သော်၎င်းတွင်ကျဉ်းမြောင်း။ ရှုပ်ထွေးနေသောလမ်းများမှစတင်သောအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များလည်းရှိသည်။
သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အဆိုပါယူဆချက်၏စီရင်စုနယ်ဘုရားကျောင်း, XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်း၌သင်သည်အထင်ကြီးမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် baroque ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို အဆိုပါ XVII ၏။ သငျသညျလညျးအောက်မှာသွားနိုင်ပါတယ် Arco de la Mora, ဝိဇ္ဇာအတတ်နှင့်ပတ်သက်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒဏ္hasာရီရှိပါတယ်; ရေပြွန်နှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စက်များသို့လည်ပတ်ပါ Híjarရှုထောင့်မင်းက Albacete တောင်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ရှုခင်းများကိုပေးစွမ်းသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါရုပ်ရှင်၏မြင်ကွင်းဖြစ်သည့်ဤမြို့အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ ထို့အပြင်သင်၌၎င်းတွေ့မြင်နိုင်သည် Santiago Apóstol၏ဘုရားကျောင်း, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလှပသော Espino Chapel တည်ရှိသည်; က ဗက်လင်မြို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ Hermitage၎င်း၏လှပသော polychrome altarpiece နှင့်အတူ ခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်းနှင့်စိတ်ပျက်ရသောကရမေလအမျိုးသားဘုရားရှိခိုးကျောင်း, XNUMX ရာစုအဆုံးမှာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်မှာ Mundo မြစ်၏အရင်းအမြစ်တွင် Castilla la Mancha, သင်သည်ကြီးစွာသောအလှတရား၏သဘာဝမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောကမ်းလှမ်း။ သို့သော်၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အလွန်ကြွယ်ဝသောheritageရာမအမွေအနှစ်များနှင့်ဂေဟစနစ်တန်ဖိုးများအတွက်သင့်ခရီးစဉ်အတွက်သင့်လျော်သည်။ ဒီနယ်မြေကိုမသိချင်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ဆွေမျိုး » Mundo မြစ်၏ရင်းမြစ်